Frederick Schiller naArthur Rimbaud. Nhetembo dzemazuva avo ekuberekwa | Zvazvino Zvinyorwa
El November 10 we1759 akaberekerwa muMarbach (Germany) Frederick schiller. Uye zuva rimwe chetero asi kuCharleville (France) uye casi zana ramakore gare gare, muna 1854, zvakaita Arthur Rimbaud. Vaviri vakava vadetembi vemukurumbiraKunyangwe avo trajectories uye hupenyu hwaive hwakasiyana kwazvo, hwemurume wechiFrench hwaive hwakanyanya uye hupfupi. Nhasi ndinorangarira nhamba yavo pamazuva avo ekuzvarwa na nhetembo mbiri dzakasarudzwa.
1.1 Kufara naLaura
1.2 Asingafi reminiscence
2.1 Haufungi here ...
Schiller aive munyori wemitambo uye muzivi pamwe nanyanduri. Akazvarirwa mukati Marbach muna 1759, akadzidza mishonga muStuttgart asi basa rake rechokwadi raigara riri rekuverenga mabhuku. Kutanga kwaro kwaive mu theatre, kubvira mushure mekushandira basa remauto, akanyora rake rekutanga basa kumatafura akafuridzirwa nekuverenga Shakespeare naRousseau. Kubva ipapo akazvipira kunhetembo.
Akanga achigara mumaguta akati wandei eGerman uye yakaita hushamwari ane mazita akafanana Goethe. Akashandisawo iyo Sachigaro weNhoroondo kuYunivhesiti yeJena kusvika 1799. Basa rake rinosanganisira mazita akadai se Iyi yemitambo seyetsika tsika, Rondedzero pahukama pakati pemhuka uye mweya mumweya, Yenyasha uye chiremerera o Njodzi inosuruvarisa. Akafira muWeimar muna 1805.
Idzi ndidzo nhetembo mbiri dzaakasarudza:
Laura, kana chako chitarisiko chiri nyoro
kunyudza mwenje unopfuta mukati mangu
mweya wangu unofara, nehupenyu hutsva,
inotsvedza muchiedza cheMay zuva.
Uye kana mumaziso ako akadzikama ndinozvitarisa
pasina mimvuri uye pasina zvifukidziro,
Kana izwi rinonzwika
muromo wako mumhepo unopa nekutura befu
uye kuwirirana kunotapira
Ini ndinonzwa kwaya kubva kungirozi,
ndokupinza mweya wangu
murudo rwakajeka anofara.
Kana mukutamba kunoenderana
rutsoka rwako, sefungu rinonyara, rinotsvedza,
kuboka rerudo risinganzwisisike
Ini ndinotarisa bapiro reruoko;
muti unotamisa matavi awo shure kwako
sekunge kuti mbira dzainzwika kubva kuna Orpheus,
uye mbesa dzangu nyika yatinotsika
Kana kubva pameso ako kuchena kupenya
kurohwa kune rakaoma machena
inopa uye inodaidza iyo yakaoma yakaoma trunk.
Iko kunakidzwa kwakadii iko kufungidzira kwakarotwa
watovepo fungisisa uye uve nechokwadi,
pandakaverenga mumaziso ako, Laura wangu!
Ndiudze shamwari, chakakonzera kupisa uku,
kwakachena, kusingafi kusingaperi kuri mandiri:
ndimise pamuromo wako nekusingaperi,
uye nyudza mukati mako, uye inofadza mhepo
gamuchira kubva kumweya wako wakanaka.
Munguva yakapfuura, imwe nguva,
Kwanga kusiri kurarama kwedu kweumwe munhu here?
Iko kutarisisa kwepasi rakatsakatika
yakapa dendere kune rudo rwedu mukati mayo yakavharirwa
mumazuva atakaona nekusingaperi tichitiza?
… Unodawo ini? Hongu wakanzwa
mubhokisi kutapira kwemoyo kunotapira
iyo shungu dzinoparidza moto wayo.
ngatidanane, uye nekukurumidza kutiza
isu nemufaro tichasimudza iro denga
kuti tichava saMwari zvakare.
Akazvarirwa mukati Charleville en 1854 uye kubva paudiki akaratidza a tarenda rakakura remabhuku. Akaenda kuParis achiri mudiki uye ikoko akaita shamwari ne vadetembi vakakosha venguva, kunyanya na Paul verlaine. Naiye akachengeta a zvinonyadzisa uye zvine rudo kudanana iyo yakapera makore maviri gare gare nekuda kwekukakavadzana kwakakomba pakati pevaviri. Yakanga iri panguva ino iyo zvinyorwa zvavo zvekutanga zvinobuda Chemhondoro Ngarava yakadhakwa o Mwaka mugehena.
Basa rake rinozivikanwa ne chiratidzo uye zvakare ine simba rakadzama re Charles Baudelaire. Kufarira kwake mu zvemashiripiti kana chitendero. Asi hupenyu hwake hwekumhanya-mhanya hwakamumanikidza kusiya nhetembo kwenguva yaaimboita famba uchitenderera europe. Aivewo achitengesa kuNorth Africa. Paakadzokera kuguta guru reFrance, basa rake rakanga ratoburitswa Zviratidzo. Akafawo munaNovember 1891.
Haufungi here ...
Haugone kufungidzira kuti sei ndiri kufa nerudo?
Ruva rinoti kwandiri: Mhoro! Mangwanani akanaka, shiri.
Chitubu chasvika, kutapira kwengirozi.
Haugone kufungidzira kuti nei ndichivira nekudhakwa!
Ngirozi inotapira yemubhedha wangu, ngirozi yaambuya vangu,
Haugone kufungidzira here kuti ini ndinoshanduka kuita shiri
kuti mbira dzangu dzinorova uye mapapiro angu anorova
Mumvura yakadzika inovhara nyeredzi,
Yakachena uye yakajeka, Ophelia anoyangarara kunge lily hombe,
inoyangarara zvishoma nezvishoma, ichizembera pamafukidziro ake ...
pavanotamba kusvika pakufa musango riri kure.
Pave nezviuru zvemakore kubvira iyo yakajeka Ophelia
pfuura, mweya chena kuburikidza nerwizi rukuru rwerima;
anopfuura makore chiuru kubva pakupenga kwayo kwakapfava
iyo inogunun'una marira ayo mumhepo yehusiku.
Mhepo, kunge corolla, inopuruzira mazamu ake
uye inowonekera, yakazvambarara, seiri yayo yebhuruu;
iyo miorivhi inodedera inodanidzira pamapfudzi ake
uye nehuma yake muzviroto, mabherifuru anopeta.
Maruva emvura akanyorova anogomera padivi pake,
paanomuka, mune akarara alder,
dendere rinobva pakudengenyeka kudiki ...
uye rwiyo, mugoridhe, runodonha kubva kudenga risinganzwisisike.
Ah kusuruvara Ophelia, akanaka kunge chando,
akafa iwe pawaive mudiki, akatakurwa nerwizi!
Uye imhepo inotonhora inodonha kubva kuNorway
rusununguko rwakaipa rwanga rwazevezerwa kwauri.
Uye iwo mweya weArcane, paunenge uchisimudza maneu ako,
mupfungwa dzako dzakashanduka akaisa manzwi asinganzwisisike;
uye kuti moyo wako wateerera kuchema
zveMasikirwo - ndeemiti neusiku.
Uye izwi riya regungwa, kunge kufema kukuru
akaputsa moyo wako munyoro uye munyoro semucheche;
uye izuva rimwe muna Kubvumbi, mucheche akachenuruka,
anopenga zvakanyanya, patsoka dzako akagara.
Denga, Rudo, Rusununguko: kurota kwakadii, oh murombo Loca!
Makanyunguduka maari sechando chiri pamoto;
zviratidzo zvako, zvakakura, zvakanyudza shoko rako.
-Uye iyo infinity inotyisa yakatyisidzira ziso rako rebhuruu.
Uye mudetembi anotiudza izvozvo muhusiku hwenyeredzi
unouya kuzotora maruva awakatema,
uye zvaakaona ari mumvura, akazendamira pazifukidzo zvake,
kune iyo yakajeka Ophelia ichiyangarara, kunge ruva hombe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Frederick Schiller naArthur Rimbaud. Nhetembo dzemazuva avo ekuberekwa
Kunyora, zvinyorwa, mabhuku ... makumi mana evanyori mafungiro